Xulka qaranka Croatia oo balan kaga sameystay France kulanka finalka koobka aduunka 2018 kadib markiii ay guul ka gaareen England - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Xulka qaranka Croatia oo balan kaga sameystay France kulanka finalka koobka aduunka 2018 kadib markiii ay guul ka gaareen England
July 11, 2018 at 22:37 Xulka qaranka Croatia oo balan kaga sameystay France kulanka finalka koobka aduunka 2018 kadib markiii ay guul ka gaareen England2018-07-11T22:37:25+00:00 CAYAARAHA
(Russia) 11 Luulyo 2018. Xulka Croatia ayaa gaaray finalka koobka adduunka 2018 kadib markii ay 2-1 ay ku garaaceen dhigooda England.
Kulanka ayaa ku bilaawday si xiiso badan waxayna labada xul Croatia iyo England ay qeybtii hore ay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u siiso badan.
Cayaarta ayaa lagu kala nastay qeybtii hore 1-0 uu ku hogaaminayay xulka qaranka England, kadib markii uu u dhaliyay daqiiqadii 5-aad ee bilawga qeybtii hore xidiga Kieran Trippier oo dhaliyay laad xur ah ee aad u qurxoon.
Labada xul ayaa inta lagu jiray qeybtii hore waxay sameeyeen fursado halis ah, balse waxay ku guuldareesteen in ay goolal u badalaan.
Dib markii loogu soo laabtay qeybta labaad ee ciyaarta xulka qaranka Croatia ayaa qabtay shaqo adag si uu u soo barbareeyo goolka ciyaarta looga hogaaminayay.
Laakiin Croatia ayaa rajada ay qabtay waxay u suuragashay daqiiqadii 61-aad kadib markii uu gool u dhaliyay xidiga kooxda Inter Milan Ivan Perisic oo caawin ka helay Sime Vrsaljko, waxayna ciyaarta sidaas ku noqotay barbaro 1-1.
Waqtiga loogu tala galay ciyaarta ee 90-ka daqiiqo ayaa wuxuu kusoo idlaaday barbaro 1-1, waxaana lagu daray 30 daqiiqo oodheeri ah.
Xulka qaranka Croatia ayaa la yimid gool daqiiqadii daqiiqadii 109-aad ee waqtiga dheeriga ahaa ee ciyaarta lagu daray kadib markii uu u dhaliyay Mario Mandzukic oo caawin qurux badan ka helay Ivan Perisic.
Ugu dambeyna kulanka ayaa ku dhamaaday 2-1 oo ay guusha ku raacday xulka qaranka Croatia oo u guday kulanka finalka koobka adduunka ay kula ciyaari doonaan dhigooda France.
« Golaha Amnaanka oo ka biyo diidsan in Ereteria laga qaado Cunaqabateenta .
Yaa loo doortay xiddiga garoonka kulankii laga adkaaday Ingiriiska? »